Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04
Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe - Zvakazarurwa 1:20
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04
Jesu akazvinyima kudya kwemazuva makumi mana ari murenje. Akaneta panyama akaedzwa naSatani. Haana kushandisa chero chipo chemweya unoshamisa kuti akunde Satani. Kune muedzo mumwe nemumwe akapindura neShoko rakanyorwa muTestamente Yekare achiti “Zvakanyorwa zvichinzi ...”
SeMunhu, Jesu akakunda miyedzo nekugara neShoko raMwari rakanyorwa. Ndiro rega raive chombo chake.
Jesu ndiye muenzaniso wakafanira kwatiri, saka isu vanhu tinofanira kutora nzira imwechete iyoyo. Tinofanira kuziva zvakanyorwa muBhaibheri togara nazvo. Hatifaniri kubva paShoko rakanyorwa kuti tibvumirane netsika nemifungo yevanhu.
Jesu akabva aenda kuNazareta akanomira musinagoge.
RUKA 4:17 Akapiwa (Jesu) bhuku yomuprofita Isaya; zvino akati apetenura, akawana pakanyorwa panoti:
18 Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza, kuti ndiparidzire varombo Evangeri; wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo; namapofu kuti vavonezve; ndiregedze vakatsikirirwa;
19 Nokuzivisa gore raShe rakanaka.
Akamirira pakati paasvika pavhesi rekupedzisira. Nei?
Izvi ndizvo zvakataurwa naIsaya chaizvo:
ISAYA 61:2 Kuti ndiparidzire gore rengoni dzaJEHOVA; nezuva rokutsiva raMwari wedu; kuti ndinyaradze vose vanochema;
Jesu akapa muono wakadzama wakanakisa. Vhesi 2 kuna Isaya rinomiririra zviitiko zviviri zvakapatsanurwa nemakore anokwana 2 000.
“Gore rengoni raShe” rinomiririra Kuuya kwaJesu Kristu kweKutanga kuzotiponesa.
“Zuva rokutsiva raMwari wedu” rinomiririra nguva yeKutambudzika kukuru inotevera mumashure meKuuya kwaShe kweChipiri paanotora Mwenga wake kuenda naye kudenga.
Saka tinofanira kudzidza kuparadzanisa Shoko raMwari zvakanaka. Tinofanira muziva kuti Gwaro rimwe nerimwe rinomiririrei.
II TIMOTIO 2:15 Shingaira kuti uzviratidze pamberi paMwari uri munhu wakatendeka, mubati usingafaniri hake kunyadziswa, unonatsa kururamisa Shoko razvokwadi.
Torai umwe muenzaniso:
MATEO 17:10 Vadzidzi vakamubvunza, vachiti: vanyori vanotaurireiko, vachiti, Eria unofanira kutanga kuuya?
11 Akapindura (Jesu) akati: Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Vadzidzi vakaziva kuti Jesu aive Mesiasi. Asi vaida kuziva kuti nei Eria asina kuuya Jesu asati auya paKuuya kwake kweKutanga. Mune mamwe mazwi vadzidzi vaive vapessana nezvaimiririrwa nehushumiri hwaJohane Mubapatidzi. Saka tinofanira kungwarira. Munhu akaita saJohane Mubapatidzi anokwanisa kuuya pamazuva edu, uye isu tinokwanisa kubva tapesana zvachose nechirevo chehushumiri hwake sezvakaitwa nevadzidzi pana Johane Mubapatidzi.
Jesu akabva ataura pamusoro paEria aizouya nguva inouya Kuuya kwake kweChipiri kusati kwasvika. Muprofita uyu anofanira kusvikodzosera isu maKristu akaponeswa kuEvangeri rizere. Yaive dzidziso yekereke yeTestamente Itsva yakarasika mukati meNguva yeRima.
Uyu haangavi Johane Mubapatidzi nekuti Johane haana kudzosa Evangeri rakazara. Hushumiri hwaJohane kwaive kutanga kweEvangeri sezvo akazivisa rubapatidzo rwemvura uye kunongedzera Mesiasi kuvaIsraeri.
MARKO1:1 Kutanga kweEvangeri yaJesu Kristu, Mwanakomana waMwari;
2 Sezvazvakanyorwa nemuprofita Isaya, zvichinzi: Tarira, ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakunatsira nzira yako.
Zvino Jesu akabva ataura zvakare pamusoro pehushumiri hwaJohane Mubapatidzi hwaive hwadarika panguva yaaitaura iyi.
MATEO 17:12 Asi ndinoti kwamuri: Eria wakatosvika, asi havana kumuziva; asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo vo, mwanakomana womunhu uchabva watambudzwa navo.
13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti wakavavudza zvaJohane Mubapatidzi.
Vakagona kupatsanura Shoko raMwari zvakanakisa.
Jesu akatanga ataura pamusoro paEria aizouya Kuuya kwaJesu kweChipiri kusati kwasvika.
Zvino achibva azotaura nezvaJohane Mubapatidzi aive auya Kuuya kwaJesu kweKutanga kusati kwasvika.
Hushumiri huviri hwakasiyana mumweya nesimba raEria , hwakapatsanurwa nemakore 2 000.
MARAKI 4:5 Tarirai, ndichakutumirai muprofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.
“zuva raJehova” ndiyo nguva yeKutambudzika kukuru.
6 Iye uchadzorera moyo yemadzibaba kuvana, nemoyo yavana kunamadzibaba avo, kuti ndirege kuvuya ndirove nyika nokutuka,
Kupatsanura Shoko zvakanaka. Kunofanira kuva nehushumiri huviri hwakafanana. Mwari anotendeutsa zvitendero zvakaipa kuva zvitendero zvakanaka.
Chekutanga hushumiri hwekutendeutsira madzibaba anotadza kuvana vanonatsa.
Humwe hushumiri hwotendeutsira vana vanotadza kumadzibaba anonatsa.
Izvi zvinogoneka sei?
Vana vainatsa vaive Jesu nevadzidzi vake vaive nechokwadi.
Johane akatendeutsira madzibaba echiJuda aitadza kuvana vainatsa, Jesu nevadzidzi vake.
Mumashure mekukwira kudenga kwaJesu, vadzidzi vakakura kuva madzibaba mapostora akanaka ekereke yekutanga.
Zvino kereke yakabva yarasikirwa nechokwadi muNguva yerima.
Nemarudzi 30 000 akasiyana-siyana emasangano emakereke ariko nhasi uno, ndisu vana vanotadza vanodisa kwazvo kutendeutsirwa kumadzibaba ainatsa eTestamente Itsva ekutenda kwemadzibaba mapostora vaive vadzidzi, naPauro akatora nzvimbo yaJudasi Iskarioti.
Tinoda Eria kuti adzosere chokwadi cheBhaibheri munguva yedu yakapatsanurwa nemasangano.
Pakati panaEria vaviri vakauya Kuuya kwaJesu kweKutanga neKuuya kwechipiri kusati kwasvika, kereke inofanira kupinda nemunguva nomwe dzakasiyana (chiedza chichena chinopatsanurwa kuva ndudzi huru nomwe dzeruvara mumurarabungu). Mukati menguva idzi kereke inenge yakazara nevaHedeni.
Kereke yakatanga nemaJuda mazhinji akatendeuka, asi nekukasika yakazokura kuva yakazara maHedeni.
Kusimbisa kutaura uku, Luka, anoda vaHedeni, akabata mazwi Jesu achitaura pamusoro pezviitiko zviviri zveTestamente Yekare apo Mwari akashandisa maHedeni muhurongwa hwake hukuru.
RUKA 4:25 Ndinokuvudzai shoko iri razvokwadi: kwakanga kunechirikadzi zhinji pakati pavaIsraeri, pamazuva aEria, panguva yakazarirwa denga makore matatu nemwedzi mitanhatu, nzara huru ikavapo panyika yose.
26 Asi Eria haana kutumwa kunomumwe wavo, asi wakatumwa Serepta bedzi, munyika yeSidoni, kumukadzi waiva chirikadzi.
Eria ndiko kudaidzwa kwechiGiriki kwezita rekuti Herija. Sidoni yaive nyika yavaHedeni.
RUKA 4:27 Kwakanga kunavaiva namaperembudzi vazhinji pavaIsraeri pamazuva emuprofita Erisha; hakunomumwe wavo wakanatswa, asi Naamani bedzi muSiria.
Eriasi ndiko kudaidza kwechiGiriki kwezita rekuti Erisha. Siria yaive nyika yevaHedeni.
Saka vese Eria maErisha (vaive nemweya waEria wakapetwa kaviri) vaishandidzana nevaHedeni. Saka hazvishamisi kuwana Eria, muprofita achauya Nguva yeKutambudzika kukuru kusati kwasvika, kuti anenge ari muHedeni muprofita kukereke yemaHedeni yekupedzisira.
RUKA 4:28 Ipapo vose vakanga vari musinagoge, vakatsamwa zvikuru, vachinzwa izvozvo,
29 Vakasimuka vakamudzingira kunze kweguta, vakaenda naye kumawere egomo, pakanga pakavakwa guta ravo, kuti vamuwisire pasi.
30 Asi iye wakapinda napakati pavo, akaenda.
Uku ndiko kuita chaiko kwevanhu. MaJuda aifunga kuti vari pedyo naMwari zvakanyanya kukunda mamwe marudzi ose. Kunzwa kuti paive nemukana wekuti Mwari aizoda maHedeni, maJuda akatsamwa kwazvo vakada kuuraya Jesu. Zvakare Mwari aive obva kune avo vaifunga kuti ndivo vanodiwa kwazvo (maJuda) achienda kumaHedeni aisadiwa airambwa nemaJuda.
Makereke ane dambudziko rimwechete nhasi. MaKristu anotsamwa panotaurwa kuti Jesu ari kunze kwekereke (nekuti tinofunga kuti anofadzwa nesu) uye ari kuronga kudzokera kumaJuda vaari kugadza munyika yavo yechipikirwa. MaKristu akaponeswa akavarairwa kwazvo mumasangano avo akasiyana-siyana zvekuti vanoramba chero kuteerera kune umwe munhu anovaudza kuti vari kukanganisa. Asi makereke akasiyana-siyana aya ese anopikisana. Saka pane kukanganisa kuzhinji mumakereke.
Sen’anga, Ruka akanyora pamusoro pekuporesa kunoshami.
RUKA 4:38 Zvino wakasimuka musinagoge akapinda mumba maSimoni. Mai vemukadzi waSimoni vakanga vakabatwa nefiviri zvikuru; vakavakumbirira kwaari.
39 Ipapo akakotamira pamusoro pavo, akaraira fiviri, ikavarega; vakasimuka pakarepo, vakavashandira.
Pano Ruka akanongedzera kutadza kwaizouya mukereke yeRoman Catholic. Simoni Petro aive nemukadzi. Vanhu vekuRoman Catholic vanoti “Ndiye Pope wekutanga”. Saka kana zvakadaro nei maPope avo asingaroori? Saka uku ndiko kumwe kurwisa Magwaro kuri muchitendero chavo.
Petro kana aive Pope wekutanga, akabapatidzwa muZita raJesu Kristu. MaCatholic vanoti maPope haatadzi, saka maPope ese anofanira kubvumirana.
Saka maPope ese anofanira kubapatidza nenzira imwechete yaishandiswa naPetro.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene.
39 Nokuti chipikirwa ndechenyu, navana venyu, navose vari kure, vanozodanwa naShe, Mwari wedu.
40 Akapupura kwazvo nomamwe mashoko mazhinji, akavaraira, achiti: Muzviponese parudzi urwu rwakakombana.
Nei maPope amazuvano vasisabapatidzi sezvakaitwa “naPope wekutanga” Petro?
Rwedu ndirwo rumwe “rudzi rwakakombama” runotenda kune zvitendero zvese zvakawanda zvisiri muBhaibheri.
Jesu akapa Petro makiyi eKudenga, Petro akazarura Musuwo weDenga kwatiri nekutiudza kuti titendevuke, tibapatidzwe muZita raJesu Kristu, tigamuchidzwe Mweya Mutsvene. Uyu murairo unobata vose vanodanwa naMwari. Hatina mvumo yekuushandura.
Kuna Mwari Mumwechete. Ane maZita ezvinzvimbo matatu: Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene. Asi Zita rake remunhu ndiJesu Kristu.
Testamente Itsva yakatanga neMweya waMwari uchizviratidza mumuviri wemunhu Jesu Kristu.
VAKOROSE 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari pamuviri.
I TIMOTIO 3:16 Hakuna-ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye wakaratidzwa panyama,
Mwari paakatora Zita rake itsva remunhu Jesu Kristu, Bhaibheri harina zvakare muTestamente Itsva kuzotaura pamusoro paMwari nezita raizivikanwa richishandiswa zvakanyanya kuTestamente Yekare rekuti Johova kana Yahweh.
Saka Jesu wekuTestamente Itsva ndiye Jehova wekuTestamente Yekare.